Sary sokitra vy mahavariana nataon'i Gil Bruvel | Famoronana an-tserasera
Teraka tany Sydney (Aostralia) tamin'ny 1959, fa nitombo tany atsimon'i Frantsa. Gil bruvel nanomboka nanandrana tamin'ny kanto tao 9 taona miaraka amin'ny rainy, mpanamboatra kabinetra fantatra amin'ny anarana hoe Gil in sary sokitra ny hazo sy ny famolavolana ny fanaka, nampihatra an'io fahalalana io tamin'ny endriny kanto tamin'ny sary sokitra taona maro taty aoriana. Tamin'ny 1974, Gil nanomboka ny fianarany tao amin'ny atrikasa famerenana amin'ny laoniny zavakanto any Chateaurenard, France, ary niara-nianatra tamin'i M. Laurent de Montcassin, nianatra ny teknikan'ny tompo taloha sy maoderina , ary koa ny tantaran'ny zavakanto tamin'ny taonjato faha-14 ka hatramin'ny faha-20.
Nanomboka teo dia nanangana ny studio-ny tao St. Remy de la Provence izy, hatramin'ny taona 1986 raha niresaka voalohany ny Etazonia, ary nanomboka tamin'izay dia manana trano maharitra hatramin'ny 1990.
Ny zavatra niainany tsirairay avy dia nampianatra azy ny fitiavany fahalalana momba ny zavakanto, ary koa ny fampandrosoana tsy tapaka fomba vaovao hijerena sy hanitarana ny fahaizanao mamorona.
Mpanakanto aho, satria io no lakan-drano mamoaka ireo hevitra sy sary izay entiko miaraka amiko isan'andro. Hatramin'ny fahazazako dia nanohy ny fikarohana manokana momba ny famoronana noforonina tao anaty saina tsy nahatsiaro tena aho, ary nitaiza tamin'ny fampiharana isan'andro tamin'ny fampiasana fampitaovana kanto isan-karazany. Tena mientanentana amin'ny andian-tsiranoka vaovao sy fatra-pitia amin'ny endriny samihafa aho, izay tsapako rehefa nanomboka aho, miaraka amin'ny hevitra hampiasa kasety ho tsipika angovo mba hampisehoana ireo fihaonan-dehiben'ny kanto sy ny fanaintainana, anatiny sy ivelany, ny ephemeral sy ny mandrakizay, izay azon'izy ireo iainana isan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary sokitra vy mahavariana an'i Gil Bruvel